नेपालको सवैभन्दा ठूलो निर्माण उपकरण तथा नविनतम् प्रविधि सम्वन्धी प्रदर्शनी हुने – RealPati.com
काठमाडौ । भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्माण उपकरण प्रदर्शनी (सीआईआई कन्म्याक २०१८) को आयोजनाका लागि जुटेको छ ।
प्रदर्शनी भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित ओपन ग्राउण्डमा २२ देखि २४ नोभेम्वर २०१८ सम्म आयोजना हुनेछ । तीन दिने प्रदर्शनीमा १ सय ५० भन्दा बढी प्रदर्शकहरुले २ लाख ५० हजार वर्गफिट क्षेत्रफलको आयोजना स्थलमा आफ्ना उपकरण तथा प्रविधि प्रदर्शन गर्नेछन् ।
यो प्रदर्शनीको देशभरबाट १० हजार भन्दा बढी व्यवसायिक अवलोकनकर्ताहरुले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रदर्शनी नेपालस्थित भारतीय राजदूतावाससंगको सहकार्यमा आयोजना हुन लागेको हो । प्रदर्शनी एशियन इन्स्टिच्यूट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेसनल अफियर्स (AIDIA) संगको परामर्शमा आयोजना हुन लागेको हो । जसमा नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ (FCAN) को सहयोग रहेको छ । भारतीय निर्माण उपकरण निर्माता एसोसिएशन (ICEMA) यसको सेक्टर पार्टनरको रूपमा रहेको छ ।
भारत सरकारको सहभागितामा आयोजना हुने सीआईआई कन्म्याक २०१८ नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रको तिव्र विकासका लागि ठूलो अवसर हुनेछ । यस्तो प्रकारको प्रदर्शनीलाई विश्वस्तरको निर्माण उपकरण सामग्रीहरु एकै स्थानमा प्रदर्शित गर्ने एउटा बलियो प्लेटफर्मको रुपमा लिइएको छ । नेपालले कुशल जनशक्तिको ठूलो कमी सामना गरिरहेको अवस्थामा यो प्रदर्शनीले निर्माण ब्यवसायीलाई हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध उत्कृष्ट उपकरण तथा प्रविधिको जानकारी दिई सहयोग पुराउने र निर्माण क्षेत्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
साथै यस प्रदर्शनीले विश्वस्तरको इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माताहरूसँग अवसर र चुनौतीहरूका बिषयमा सहभागीहरूलाई छलफल र संवादको अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ । प्रदर्शनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण सामग्री एवं उपकरणहरु सँगसँगै उपलब्ध हुनेछन् ।
यसको अतिरिक्त प्रदर्शनीले निर्माण ब्यवसायीहरूको लागि नविनतम प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुराउनेछ । साथै उनीहरुले उपकरण निर्माताहरू द्वारा प्रदान गरिने विशेष अफरहरूको फाइदा लिन सक्नेछन् । प्रदर्शनीले विभिन्न सहभागीहरुलाई निर्माण सम्वद्ध मशीनरी र प्रविधिलाई तुलना गर्न ब्यवसायीलाई मद्दत पुराउनेछ र निर्माण उपकरणको खरीदमा निर्णय लिन र फाइनान्सको सुविधा लिन सघाउने छ ।
काठमाडौमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीआईआई कन्म्याक २०१८ तथा एमएडब्ल्यू अर्थमुभरका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले विश्वस्तरीय निर्माण उपकरणहरु एकै स्थानमा अवलोकन गर्नका लागि यस प्रदर्शनी अद्वितीय प्लेटफर्मको रूपमा रहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस कार्यक्रमको भव्यता र सब्यताले नेपालमा आयोजना हुने अन्य प्रदर्शनीको स्तर बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यो कार्यक्रम नेपालमा हुने प्रदर्शन ब्यवसायमा नयाँ कोशेढुङगा नै सावित हुने छ ।
त्यस्तै, सीआईआई कन्म्याक २०१८ का सदस्य तथा एफजी इन्कर्पोरेटेड प्रा. लि. का निर्देशक केदार लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनेहरुको स्वागत गर्दै सो कार्यक्रमको महत्वको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका साथसाथै व्यापारको आयतन, प्रदर्शनीको व्यापक सम्भावना र सीआईआई कन्म्याकले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई पनि प्रकाश पार्नुभयो ।
नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष ए डी लामाले कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुलाई धन्यवाद दिँदै नेपालका निर्माण ब्यवसायीहरुलाई यो प्रदर्शनीको महत्वको बारेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्माण ब्यवसायीलाई यो प्रदर्शनीमार्फत विभिन्न प्रविधि तथा उपकरणको तुलना गर्न र खरीदको निर्णय लिनको लागि सजिलो हुने बताउनुभयो ।
नेपालमा निर्माण उद्योगको तिव्र वृद्धि एवं ब्यवसायिक अवसरहरूको प्रवाहका लािग सीआईआई कन्म्याक २०१८ फलदायी हुनेछ । जसले देशमा व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार प्रदान गर्नेछ । यसले नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर र निर्माण परिदृश्यको विकासका लागि एक नयाँ मार्ग निर्देशन गर्दै जानेछ । ओर्जिनलइक्विपमेण्टका निर्माताहरूले यस क्षेत्रमा संरचनाको तीव्र विकासमा जोड दिएका छन, यसर्थ यो क्षेत्रको निर्माणको लागि नवीनतम मशीनरी र टेक्नोलोजीलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
सीआईओ कन्म्याक २०१८ नेपाल संस्करण नेपाली बजारमा निर्माण उपकरण उद्योग प्रदर्शनका लागि सबैभन्दा व्यापक प्लेटफर्म हुनेछ । प्रदर्शनी निर्माण उपकरण र त्यसका पाटपुर्जाहरु, ओ इ एम निर्माताहरूमा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न र नेपालमा आफ्नो डिलर आधार विस्तार गर्नका लागि यो प्रदर्शनी एक राम्रो अवसर हुनेछ ।